अर्को बिहे – मझेरी डट कम
बाको समस्या पनि समाधान हुने अनि मेरो इच्छा पनि पूरा हुने जुक्ति निकालेँ मैले। एक साँझ बा कामबाट फर्केपछि मैले भनेँ, “बा, म काठमाडौँ पढ्न जान्छु, तपाईंले खर्च पठाउनु पर्दैन। ट्युसन पढाएर पढ्ने र बस्ने खर्च निकाल्छु। काठमाडौँमा बसेको वीरगन्जकै मेरो एक जना साथीले ट्युसन पढ्ने विद्यार्थी खोजिदिन्छु भनेको छ। बस्ने पनि उसैसँग हो। उसको डेरा पुतलीसडकमा छ।” तर पनि बाको मुहारमा प्रसन्नता देखिएन। तर, पीडा थिएन। केही क्षण सोचेर भन्नुभयो, “तिमीलाई उतै जाने इच्छा छ भने जाऊ, म के भनौँ ! मैले रोक्नु पनि उचित हुँदैन। ठीकै छ त, जाने तयारी गर्नू।” मैले भनेँ, “अँ बा, सुरुका दुई-तीन महिनाको खर्चको व्यवस्था त तपाईंले मिलाइदिनुपर्छ।” बाले केवल सहमतिमा शिर हल्लाउनु भयो, केही बोल्नुभएन। भोलिपल्ट साँझको कुरा हो, बा कामबाट आउनेबित्तिकै भन्नुभयो, “कृष्ण यता हेर् त !” म हतारिंदै बाको नजिक पुगेँ। उहाँले खल्तीबाट पैसा झिकेर मेरो हातमा राखिदिँदै भन्नुभयो, “सात हजार छ, राम्रोसँग प्यान्टको भित्री खल्तीमा राख्नू।” पैसा पाएपछि मेरो मनमा खुसीको बाढी नै आयो, म ज्यादै हषिर्त भएँ। साइन्स पढेर प्रोफेसर हुने मेरो सपनाले बाटो पाउँदै थियो। तर, म फेरिकेही सोचेर उदास भएँ। मेरो मुहारको उदासीलाई पढेर बाले भन्नु भयो, “किन, यति पैसाले पुग्दैन?” मैले भने, “होइन, पैसाको कारण होइन बा, यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनुभयो भन्ने चिन्ता लागेको !” बाले भन्नुभयो, “पसलमा सामान्य तलबमा काम गर्ने मान्छेसँग यति पैसा एकैचोटि कसरी हुनु? तिम्रो आमाको गहना थियो, बैनीहरूको बिहेमा दिनुपर्छ भनेर राखेको, तिनै गहनाहरू बैँकमा बन्धकी राखेर पैसा झिकेको हो।”
म काठमाडौँ आएको दुई वर्ष भइसकेको थियो। बीएस्सीको पढाइ सकिनसकिन आँटेको थियो। परीक्षाको तयारीमा म एकाग्र भएर लागेको थिएँ। तर, वीरगन्जबाट आउने खबरहरूले भने मलाई निकै चिन्तित तुल्याइरहेका थिए। पछिल्लोपटक पठाएको चिट्ठीमा जेठी बहिनी पद्माले प्रस्ट लेखेकी थिइन्, “दादा बाले अर्को बिहे गर्ने विचार गर्नुभएजस्तो छ। अचेल घर पनि अबेर आउनुहुन्छ। प्राय: रात परेपछि मात्र आउनुहुन्छ। उदास देखिनुहुन्छ, जुनबेला पनि। अस्ति माया फुपूकहाँ गएका बेला बिहे गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएछ पनि। यो कुरा माया फुपूले नै भन्नुभएको हो।”
चिट्ठीमा बहिनीले लेखेकी थिइन्, “दादा बाले अर्को बिहे गर्ने निधो नै गरेजस्तो छ, एक जना विधवासँग। हरि काकाले नै खोजिदिनुभएको रे ! तपाईं एकचोटि वीरगन्ज आउनूस् अनि बालाई सम्झाउनूस्। हामीले त बालाई केही भन्ने आँट पनि गर्न सकेका छैनौँ।” म बीएस्सी परीक्षा सकिएको भोलिपल्टै वीरगन्ज पुगेँ हतारिंदै।
थकाइले गर्दा म राती खाना खाएपछि बासँग कुरा नगरी सुतेँ। भोलिपल्ट भने बिहान चिया खाने क्रममा कुराको आरम्भ बाले नै गर्नुभयो। भन्नुभयो, “हेर् न बाबु ! मलाई त मान्छेहरूले बिहे गर्, बिहे गर् भन्छन्। हरलिे, मायाले, ठूली भाउजू, सबैले…। छोरा पढाइमै व्यस्त छ, भोलि जागिरको खोजीमा कताकता लाग्ने हो। छोरीहरूको पनि बिहे भएपछि आ-आफ्ना घर लाग्छन्। तपाइर्ं एक्लो पर्नुहुन्छ। बिहे गरे दुवैलाई एकअर्काको सहारा हुन्छ। ढुंगालाई माटोको, माटोलाई ढुंगाको भर भएझैँ। लौ भन् तिमीहरूको के सल्लाह छ?” मेरो लामो मौनतालाई चिरेर बाले नै भन्नुभयो, “तिमीहरूको विचारमा के गर्दा ठीक होला?” मैले खालि यत्ति भनेँ, “एकपटक बहिनीहरूसँग पनि सोधौँ न ! उनीहरूको पनि त राय बुझ्नुपर्‍यो।” मेरो प्रतिक्रियामा बाले केही भन्नुभएन।
खासमा मैले बाको इच्छाको विरोध उहाँसँगै गर्नु उचित ठानिनँ। अनि, हरि काकाकहाँ पुगेँ। उहाँलाई भनेँ, “काका ! हजुरले बालाई सम्झाइदिनुपर्‍यो। बाले यस उमेरमा बिहे गर्नु उपयुक्त हुँदैन। काकाको कुरा बाले सुन्नुहुन्छ पनि।”
मेरो विचारप्रति हरि काका सहमत हुनुभएन। ठाडै विरोध गर्नुभयो, “हेर्, कतिपय कुरा प्रस्ट पार्न सकिँदैन, अवस्था वा उमेरमा पुगेपछि स्वत: थाहा हुन्छ यस्ता कुराहरू। कुनैकुनै कुरा नभोगी थाहा हुँदैन। छोटकरीमा के बुझ् भने बिहे गर्ने तेरो बाको स्वेच्छा होइन, बाध्यता हो।” मैले असहमति प्रकट गरेँ, “काका घरमा नयाँ आमा आएपछि के बहिनीहरूले सजिलै स्वीकार गर्लान् ! यदि नयाँ सदस्य र बहिनीहरूबीचमा टकरावको स्थिति आयो भने बाले सजिलोभन्दा पनि उल्टै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। साँचो कुरा भन्ने हो भने बाको इच्छा मलाई पनि मन परेको छैन। बाको स्थितिमा धेरै मान्छेहरू एक्लै बसेका छन् र पनि खुसी नै छन्। नरेन्द्र भिनाजुलाई हेर्नूस् त ! फुपू बित्नु हुँदा भिनाजुको उमेर केवल ३० वर्षको थियो तैपनि भिनाजुले आजसम्म बिहे गर्नु भएन। छोराछोरीको लालनपालन र शिक्षामै जीवन बिताउनुभयो। फेरि हामी बालाई एक्लो हुन दिँदैनौँ पनि, हामी एकदम राम्रो हेरविचार गर्छौं।” धेरै तर्क र वितर्कपछि हरिकाका बल्ल बालाई सम्झाउन तयार हुनुभयो।
काकाले बालाई धेरै सम्झाउनुभयो। तर पनि, बिहे गर्ने इच्छा त्याग्नुभएन। केवल इच्छालाई थाती मात्र राख्नुभयो। बालाई सम्झाएपछि काकाले मलाई यही कुरा भन्नु भयो, “हेर् केटा ! दाइले अहिले नै त बिहे गरहिाल्नु हुँदैन तर बिहे गर्ने इच्छाचाहिँ त्याग्नुभएको छैन।”